Sendoso: Kurudzira Engagement, Kuwana, uye Kuchengeta neDirect Mail | Martech Zone
Pandakashanda pane hombe SaaS chikuva, imwe nzira inoshanda yataishandisa yekufambisa rwendo rwevatengi kumberi kwaive nekutumira yakasarudzika uye yakakosha chipo kune edu tarisiro vatengi. Nepo mutengo wekutengesa wanga uchidhura, iko kudyara kwaive nekudzoka kunoshamisa mukudyara.
Nebhizinesi rekufamba pasi uye zviitiko zvakamiswa, vatengesi vane dzimwe sarudzo shoma kuti vasvike tarisiro yavo. Pasina kutaura nezvekuti makambani ari kutyaira ruzha rukuru kuburikidza nemadhijitari. Direct mail inokwanisa kukwira pamusoro peruzha, kukwira kumusoro kwe 30x chiyero chekupindura email.
Kana iwe uchikwanisa kubatanidza vateereri vako nezvakanaka, zvinooneka, uye zvine simba zvinokurudzira, unogona kufambisa rwendo rwacho kumberi. Sendoso mupi wemasevhisi aya - kubva pakusarudzwa kwechigadzirwa, kusvika otomatiki, kuchinjanisa kusangana, kuburikidza nokuzadzikiswa. Iri zano rinozivikanwa se yakananga tsamba yekushambadzira otomatiki.
Mhedzisiro yacho inonakidza, Sendoso vatengi vakawana:
22% kuwedzera kwemari pamukana
35% kuwedzera mukutendeuka kumisangano
60% yekupindura mwero kubva pamapakeji akatumirwa
450% inodzoka pamari kubva kuzvibvumirano zvakavharwa
500% kuwedzera mumatengo epedyo
Uchishandisa kero kusimbiswa, Sendoso inogona kutumira ako tarisiro kana vatengi chigadzirwa chakasarudzika, egift, inoparara, kana chero chigadzirwa chinobva kuAmazon. Ipuratifomu iyi inosanganisirwa neakakura ekushambadzira otomatiki mapuratifomu, ekushambadzira ekubatanidza mapuratifomu, maCRM, vatengi vanobatanidzwa mapuratifomu uye ecommerce mapuratifomu.
Gadzirira Rwendo rweMutengi Wako
Kuziva - tumira makadhi e-3D-pop-up, zvinyorwa zvemabhuku, mabhegi, mabheja anotakurika, kana zvimwe zvinhu zvidiki zvekusvika pane radar yevanhu.
Chisarudzo - nyatso batana neako akawunti maakaunti nekutumira anoenderana eemail mailer kana emhando yepamusoro majaketi ane logo yako.
Kufungisisa - Kufuridzira kufarira uye chinangwa pakati pevateereri vako netsika vhidhiyo mailer kana zvinotapira zvinobata zvine logo yako.
Kurumidza Kutengesa Yako Funnel
Mimwe mienzaniso yezvigadzirwa iwe zvaunokwanisa kushandura kutumira kwe:
Vhura Masuo - Kwira padhesiki remumwe munhu pane kuti urwe mubhokisi ravo reinbox nechinhu chakasarudzika kubva kuAmazon chine chinyorwa chakanyorwa nemaoko.
Deal Accelerators - Simbisa hukama uye pedzisa hurukuro dzekukurukurirana nebhodhoro rewaini rakagadzirwa nekambani yekodhi yako.
Vagadziri Vemusangano - Shingairira vanoita zvisarudzo vakawanda kamwechete nekutumira makeke, makuki, kana zvimwe zvinotapira izvo hofisi yese inogona kugovera.
Uchishandisa Sendoso, kambani yesoftware yepamhepo kuita kunze kwekuita,akakwanisa kuvaka $ 100M mupombi uye $ 30M mune mari kubva kumushandirapamwe mumwe. Vakatumira makumi masere nemakumi matatu neshanu nemazana masere kumaakaunzi eABM, kusanganisira kadhi rechipo, chinotapira, Total Economic Impact infographic, Total Economic Impact executive summary, netsamba yakanyorwa nemaoko.
Zvigadzirwa zvakasanganiswa zvinosanganisira Salesforce, Salesforce Kushambadzira Cloud, Salesforce Pardot, Eloqua, Hubspot, Outreach, Salesloft, SurveyMonkey, Influitive, Shopify neMagento.
Kana iwe uchifarira kudzidza zvakawanda nezvekuti sei 1: 1 yemunhu kushambadzira kunogona kugadzira zvine musoro chiratidzo chiziviso uye kuvaka yako post-COVID pombi, kumbira Sendoso demo.
Kumbira Sendemo Demo
Tags: eloquahubspotKufuriraMagentooutreachsalesforcemutengesi pardotSalesfore Kushambadzira CloudSalesLoftshopifySurveyMonkey